ျပည္တြင္းသတင္း Archives - Achawlaymyar
တော်လှန်ရေးကြီးမှာ သူလေးစားရတဲ့ သူတစ်ဦးကို ထုတ်ဖော်ပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုတ်တာ ကိုပေါက်
May 27, 2022 by Achawlaymyar
တော်လှန်ရေးကြီးမှာ သူလေးစားရတဲ့ သူတစ်ဦးကို ထုတ်ဖော်ပြောပြလာတဲ့ဒါရိုတ်တာကိုပေါက် ပရိသတကြှီးရသရေုပဆြောငဒြါရိုတတြာကြိုပေါကကြတော့ အာဏာရှငတြောလြှနရြေးကှီးမှာ ပှညသြူဘကကြရပတြညခြဲ့တာလညြးဖှဈပါတယြ။ ဒါကွောငျ့မလို့ ကိုပေါကျရဲ့နအေိမျကိုခြိတျပိတျခံလိုကျရတာလညျးဖွဈပါတယျ။ လက်ရှိမှာတော့ ကိုပေါက်ကလွတ်မြောက်နယ်မြေတခုကိုရောက်ရှိနေပြီး တော်လှန်ရေးကြီးမှာတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအစွမ်းကုန်ပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကိုပေါက်ကသူလေးစားတဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုတ်တာကိုပေါက်ကကျနော် သူ့လို အခုချိန်ထိ မလုပ်နိုင်သေးဘူး။သူလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။စိတ်ကူးတွေ ရှိပေမယ့်ကျနော်လက်တွေ့အကောင် အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျနော် သူ့ကိုလေးစားတယ်။သူဆိုတာ ဒါရိုက်တာဏကြီး ပါ။ဆိုပြီးပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုတ်တာဏကြီးက ရုပ်ရှင်ရိုတ်ပြီးတော်လှန်မယ်ဆိုကာ နိုင်ငံပျောက်သူဇာတ်လမ်းကိုပိုင်ဖြိုးသု၊ဒေါင်းတို့နဲ့အတူရိုတ်ကူးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi Version ပရိသတကြှီးရသရေုပဆြောငဒြါရိုတတြာကြိုပေါကကြတော့ အာဏာရှငတြောလြှနရြေးကှီးမှာ ပှညသြူဘကကြရပတြညခြဲ့တာလညြးဖှဈပါတယြ။ ဒါကွောငျ့မလို့ ကိုပေါကျရဲ့နအေိမျကိုခြိတျပိတျခံလိုကျရတာလညျးဖွဈပါတယျ။ လက်ရှိမှာတော့ ကိုပေါက်က လွတ်မြောက်နယ်မြေတခုကိုရောက်ရှိနေပြီး တော်လှန်ရေးကြီးမှာ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က အစွမ်းကုန်ပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကိုပေါက်က သူလေးစားတဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုတ်တာကိုပေါက်ကကျနော် သူ့လို အခုချိန်ထိ မလုပ်နိုင်သေးဘူး။သူလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ စိတ်ကူးတွေ ရှိပေမယ့် ကျနော်လက်တွေ့အကောင် အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ကျနော် သူ့ကို လေးစားတယ်။သူဆိုတာ … Read more
NUG နဲ့ AA တို့ အွန်လိုင်းကနေ ၂ နာရီကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
May 17, 2022 by Achawlaymyar
NUG နဲ့ AA တို့ အွန်လိုင်းကနေ ၂ နာရီကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မေလ ၁၆ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီ နှင့် ရက္ခိုင်ပြည်သူ့အစိုးရ၊ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်တို့ ယနေ့ မေလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ၂ နာရီကြာ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ကနဦး သတင်းများအရ သိရပါတယ် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒေါ်ဇင်မာအောင်၊ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဦးဆောင်သော အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီနှင့် ရက္ခိုင်အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင် ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ ညိုထွန်းအောင်တို့ ဦးဆောင်သည့် ရက္ခိုင်ပြည်သူ့အစိုးရ တို့အကြားတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးမှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသော နိုင်ငံရေး အခြေအနေများ တိုင်းပြည်၏ အခြေအနေများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ နှစ်ဖက် … Read more
လင်မယားချင်း စကားများရာမှ မိန်းမဖြစ်သူမှာ စိတ်ညစ်၍ See more…..
လင်မယားချင်း စကားများရာမှ မိန်းမဖြစ်သူမှာ စိတ်ညစ်၍ See more….. မနေ့ညနေ (၆)နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ရပ်ကွက်(၇) ၊နယ်မြေ(၁၈)တွင် လင်မယားချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ မိန်းမဖြစ်သူမှာ အရက်ပျံ သောက်လိုက်သဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါရန် တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ဦးမှ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြား လာပါသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ရပ်ကွက်(၇)၊နယ်မြေ(၁၈) နယ်မြေမှူး-ဦးညွှန့်ဝင်းနှင့် ပူးပေါင်းကာ အရက်ပျံ သောက်မိသူ-ဒေါ်ရီရီသန့်၊ အသက်(၃၀)နှစ် ၊ရပ်ကွက်(၇) ၊နယ်မြေ(၁၈) ၊နေထိုင်သူအားသယ်ဆောင်၍ လားရှိုးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး- အရေးပေါ်သို့၊ ထိုမှတစ်ဆင့် လားရှိုးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး-ဖျားနာ ကုသဆောင်သို့ ကူညီပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပါသည်။ လားရှိုးလူငယ်များ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ လားရှိုးမြို့… မနေ့ညနေ (၆)နာရီ အခြိနျခန့ျတှငျ ရပျကှကျ(၇) ၊နယျမွေ(၁၈)တှငျ လငျမယားခငြျး စကားမြား ရနျဖွဈရာမှ … Read more
ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ကြီး မိုးကြိုးခလို့ ရွှေသင်္ကန်း နဲ့ ကျောက်လုံးတော်…see more
May 16, 2022 by Achawlaymyar
ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ကျိုက်ထီးရိုးမှာ မိုးသည်းထန်စွာပြီး စေတီတော်ကြီးကို မိုးကြိုးခလို့ ရွှေသင်္ကန်း အနည်းငယ် ကွာကြမှု ဖြစ်ပွား မေလ ၁၆ ယနေ့ နံနက် ၁ နာရီကျော်အချိန်ခန့်က ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်မြတ်ကြီးမိုးကြိုးခလို့ ရွှေသင်္ကန်းများအနည်းငယ် ကွာကြမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကျိုက်ထီးရိုးရင်ပြင်တော် လုံခြုံ ရေး တာဝန်ယူထားသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ယနေ့‌မေလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီဝန်းကျင်ခန့်က ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုး တောင် ပေါ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူ စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ကျောက်လုံး တော်ကိုလည်း မိုးကြိုးအနည်းခကာ စက်ကွင်းမိသွားခြင်းဖြစ် တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ယင်းက မိုးက မနေ့ညနေကတည်းကရွာနေတာ။ ဘုရားကိုပိတ်ထားလို့ မိုးတိတ်မှ သိရတာ။အပျက်အစီးကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူး။ရွှေသင်္ကန်းကပ်ထားတဲ့နေရာအချို့ကွာပြီကျောက်တုံးတော်ကြီး အနည်းငယ် ထိသွားတာလောက်တော့ရှိတယ် လို့ ယင်းက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးရှိခဲ့ဖူးပြီး ထိုသို့မဖြစ်စေရန် … Read more
ဖုန်းများ၏ IMEI နံပါတ်များ မှတ်ပုံမတင်လျှင် အခွန်မဆောင်လျှင် ဖုန်းလိုင်းအသုံးပြု ခွင့်ပိတ်မည့် စစ်ကောင်စီ
May 13, 2022 by Achawlaymyar
စစ်ကောင်စီက ပြည်သူများ၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဟန်းဆက်များအားလုံးကို အခွန် ကောက်၊ မှတ်ပုံတင်ခိုင်းပြီး လုံခြုံရေးအရ အလုံးစုံ ထိန်းချုပ်မည် ၊ ဖုန်းဟန်းဆက်များ၏ IMEI နံပါတ်များ မှတ်ပုံမတင်လျှင် အခွန်မဆောင်လျှင် ဖုန်းလိုင်းအသုံးပြု ခွင့်ပိတ်မည် ရန်ကုန်၊ မေ ၁၃ စစ်ကောင်စီက ပြည်သူများ အသုံးပြုနေသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဟန်းဆက်များ၏ IMEI နံပါတ်များကို ဟန်းဆက် တစ်လုံးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒေါ်လာ (မြန်မာငွေကျပ် ၆၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်) မှတ်ပုံတင်အခွန်ဆောင်ခိုင်းပြီး လုံခြုံ ရေးအရ ပိုမို ထိန်းချုပ်ရန်ရှိကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းရင်းမြစ်က အတည်ပြုပြောဆိုသည်။ မေလ ၁၁ ရက်နေ့ မိုဘိုင်းဖုန်းဟန်းဆက်များ အခွန်ငွေကောက်ခံရေး အစည်း အဝေးတစ်ရပ်ကို နေပြည်တော်၊ စီမံ ကိန်း နှင့် ဘဏ္ဏာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ( … Read more
မကြားဘူးတာတွေ ကြားနေရပြီ ဆိုင်ကယ်ဝယ်မပေးလို့ မိဘနှစ်ပါးကို
May 8, 2022 by Achawlaymyar
မကြားဘူးတာတွေ ကြားနေရပြီ ဆိုင်ကယ်ဝယ်မပေးလို့ မိဘနှစ်ပါးကို see more… ပင်လုံမြို့မှာ မကြားဖူးတာ မမြင်ဖူးတာ ဖြစ်ကုန်ပြီ၊ မိဘကို ဆိုင်ကယ်ဝယ်ခိုင်းတာ မဝယ်ပေးလို့ သားဖြစ်သူက မိဘနှစ်ပါးကို ဓားနဲ့ ထိုးသတ်လိုက်တယ်၊ တာဝန်ရှိလူကြီးများ သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါ အဖေက ကုတင်ဘေးမှာ သေနေတယ်၊ ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း အမေက အိမ်ဘေးထင်းပုံအောက်မှာ မြုပ်ထားတယ်၊ ဖြူစင်မေတ္တာနာရေးနှင့် မြတ်နှလုံးသားလူငယ်အဖွဲ့မှသွားရောက်ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးပြီး ဆေးရုံရင်ခွဲရုံသို့ ပို့ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရှိရပါသည်။ ပင်လုံမြို့မှာ မကြားဖူးတာ မမြင်ဖူးတာ ဖြစ်ကုန်ပြီ၊ မိဘကို ဆိုင်ကယ်ဝယ်ခိုင်းတာ မဝယ်ပေးလို့ သားဖြစ်သူက မိဘနှစ်ပါးကို ဓားနဲ့ ထိုးသတ်လိုက်တယ်၊ တာဝန်ရှိလူကြီးများ သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါ အဖေက ကုတင်ဘေးမှာ သေနေတယ်၊ ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း အမေက အိမ်ဘေးထင်းပုံအောက်မှာ မြုပ်ထားတယ်၊ ဖြူစင်မေတ္တာနာရေးနှင့် မြတ်နှလုံးသားလူငယ်အဖွဲ့မှသွားရောက်ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးပြီး ဆေးရုံရင်ခွဲရုံသို့ ပို့ပေးလိုက်တယ်လို့ … Read more
သရဖူ ဇာတ်လမ်းတွဲက နောက်ဆုံးပါဘဲလို့ ပြောလာတဲ့ ခြူးလေး
သရဖူ ဇာတ်လမ်းတွဲက နောက်ဆုံးပါဘဲလို့ ပြောလာတဲ့ ခြူးလေး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို သရဖူ ဇာတ်လမ်းတွဲက နောက်ဆုံးပါဘဲလို့ ပြောလာတဲ့ ခြူးလေး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို သရဖူ ဇာတ်လမ်းတွဲက နောက်ဆုံးပါဘဲလို့ ပြောလာတဲ့ ခြူးလေး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို သရဖူ ဇာတ်လမ်းတွဲက နောက်ဆုံးပါဘဲလို့ ပြောလာတဲ့ ခြူးလေး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို သရဖူ ဇာတ်လမ်းတွဲက နောက်ဆုံးပါဘဲလို့ ပြောလာတဲ့ ခြူးလေး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို … Read more
မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အင်လျားလမ်းအိမ်ရောင်းချမှု ၄၈နာရီအတွင်းမှာပဲ……seemore
မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အင်လျားလမ်းအိမ်ရောင်းချမှု ၄၈နာရီအတွင်းမှာပဲ……seemore အကြမ်းဖက် စစ်ရာဇဝတ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင် မတရားသဖြင့်ရယူထားတဲ့ ၁၄/အင်းယားလမ်းနေအိမ်ကို မေလ ၅ ရက်နေ့မှာ အစုရှယ်ယာအဖြစ် စတင်ရောင်းချခဲ့ရာ ၄၈ နာရီအတွင်း ဒေါ်လာ ၁ သန်းထိ ရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးတင်ထွန်းနိုင်က ပြောပါတယ်။ “စတင်ရောင်းချတာ ၄၈ နာရီမပြည့်သေးခင်မှာပဲ ဒေါ်လာ ၁ သန်းဖိုး ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာကိုကြည့်ရင် တော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ခွန်အားနဲ့ ပြင်းပြတဲ့အာသီသကို ဖော်ညွှန်းထင်ဟပ်စေပါတယ်” လို့ ၎င်းက လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကတစ်ဆင့် ပြည်သူတွေကို အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်ကျန်အစုရှယ်ယာ ၉၀၀၀၀ သာ ကျန်ရှိတော့တဲ့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်တိုအတွင်း ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပြည့်မီစေဖို့ အရေးတော်ပုံအောင်စိတ်နဲ့ ဆက်လက်ဝယ်ယူအားပေးကြဖို့ကိုလည်း ဝန်ကြီးက … Read more
မနေ့ည၉နာရီကမန္တလေးလမ်း(၃၀-၆၀×၆၁)ပေါ်မှာ ဖြစ်သွားတာSee More….
May 7, 2022 by Achawlaymyar
မနေ့ည၉နာရီကမန္တလေးလမ်း(၃၀-၆၀×၆၁)ပေါ်မှာ ဖြစ်သွားတာSee More…. 5.5.2022 မနေ့ညက ရှစ်နာရီနဲ့ ၉နာရီကြား လမ်း ၃၀,၆၀,၆၁ကြားတွင် ညီမဖြစ်သူနဲ့တူမဖြစ်သူမှ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်တွင် ဆိုင်ကယ်နောက်မှ scoppy အနက်ရောင်ဖြင့် လူနှစ်ယောက်မှ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါ–င်းကိုရို–က်ကာ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလုယူသွားခဲ့ပါသည် ညီမဖြစ်သူမှာခေါ–င်း ၅ချ-က်ချု-ပ်ရပြီး တူမဖြစ်သူမှာ လက်ခိုင်းမိသွားခဲ့ပါသည် ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုံး ပန်းပွင့်ပုံဆွဲသီးတစ်ခု ဟန်းချိန်းတစ်ခု oppo ဖုန်းတစ်လုံး ငွေသားတစ်သိန်းပါသွားခဲ့ပါသည်။အများသိအောင် ဒီသတင်းကို ကူညီခြင်းဖြင့် Shareပေးကြပါဗျာ။ Unicode မနေ့ည၉နာရီကမန္တလေးလမ်း(၃၀-၆၀×၆၁)ပေါ်မှာ ဖြစ်သွားတာSee More…. 5.5.2022 မနေ့ညက ရှစ်နာရီနဲ့ ၉နာရီကြား လမ်း ၃၀,၆၀,၆၁ကြားတွင် ညီမဖြစ်သူနဲ့တူမဖြစ်သူမှ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်တွင် ဆိုင်ကယ်နောက်မှ scoppy အနက်ရောင်ဖြင့် လူနှစ်ယောက်မှ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါ–င်းကိုရို–က်ကာ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလုယူသွားခဲ့ပါသည် ညီမဖြစ်သူမှာခေါ–င်း ၅ချ-က်ချု-ပ်ရပြီး တူမဖြစ်သူမှာ လက်ခိုင်းမိသွားခဲ့ပါသည် ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုံး ပန်းပွင့်ပုံဆွဲသီးတစ်ခု ဟန်းချိန်းတစ်ခု … Read more
ချစ်ခြင်းကိုမခွဲဖို့ပြောရင်းကလက်မခံသဖြင့် စကားအခြေအတင်များခဲ့ရာSee More…
May 6, 2022 by Achawlaymyar
ချစ်ခြင်းကိုမခွဲဖို့ပြောရင်းကလက်မခံသဖြင့် စကားအခြေအတင်များခဲ့ရာSee More… ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တာမွေမြို့နယ်တွင် ညနေ ၈ နာရီခန့်ကကျူးလွန်သူ သက်မှူးခင်(ခ) သက်နှင်းအေးက သေဆုံးသူ မကေကေအောင်၏ မောင်အရင်းဖြစ်သူနှင့် ချစ်ကြိုက်နေသည့်အတွက် ၎င်းတို့ချစ်ခြင်းကိုမခွဲရန် မကေကေအောင်အားပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ပြောဆိုစဉ် လက်မခံသဖြင့် စကားအခြေအတင်များခဲ့ရာကနေ လူ သက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ညနေ ၈ နာရီအချိန်ခန့်တွင် တာမွေမြို့နယ်နေ မ—– သည် နေအိမ်၌ ရှိနေစဉ် အစ်မဖြစ်သူ မကေကေအောင်၏ ချစ်သူဖြစ်သူ ရောက်ရှိလာပြီး အစ်မဖြစ်သူမှာ ၎င်း၏အိမ်အောက်ထပ်မီးဖိုခန်းတွင် ဒဏ်ရာများဖြင့် လဲကျနေသဖြင့် သျှင်ပါကူဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေး ခဲ့ကြောင်းပြောသဖြင့် နှစ်ယောက်အတူ ဆေးရုံသို့သွားရောက်၍ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ အမှုမှန်ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် အခင်းဖြစ်နေအိမ်သို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ မှုခင်းဖော်ထုတ် ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များ၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မှုခင်းနှိမ်နင်းရေးဌာနစုမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာမွေမြို့မရဲစခန်းမှ … Read more